သင်္ဃန်းကျွန်း ဘ၀မြင့် လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ၂၅-၃၀ ပေ ပထမထပ် အခန်း၂ခန်းပါ နောက်ဖေးကြွေပြားအပြည့်ခင်း ဘိုထိုင် အဲကွန်း ၁လုံးပါ ချက်ချင်းတက်နိုင်
$ 400 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | ကွန်ဒို
On the Bayint Naung Main Rd, Infront of Bayint Naung Tower, New Building, 1st Floor, 25x50 sqft.2aircon, shower, Lift. 1 Master, 1 single.2bathrooms. Very good to open office. Near hospitals, Hledan markets, Hledan Center, Gamone Pwint shopping center, language centers. If local rent-6 Lakh/m. Foreigner -$400/m
14×70 4F အိပ်ခန်း၂ခန်း
ရေကျော်လမ်းမနီး 14×70 4F အိပ်ခန်း၂ခန်း liftပါသော ခန်းလေးပါ
Apartment for Rent @ Ayar Chantha Condo! 🏡2bedrooms, Living Room, Kitchen,3Aircons &amp; Condo Facilities အခန်းအသစ်စက်စက်နော် ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုက သုဝဏ္ဏ ကမာကြည်လမ်းဘက်က ထွက်ရင် ဆယ်မိနစ်ပဲ.. 🚗🚗🚗 17လွှာက အခန်း အသစ်စက်စက်လေး...
မဟာသုခလမ်း တိုက်​ခန်း ငှါးမည်​
မဟာသုခလမ်း တိုက်ခန်းငှားမည် ☘️ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ☘️15’x45’ ☘️အခန်း (၁)ခန်းပါ ☘️၃လွှာ 200,000/-ကျပ် 095041178
0 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
fully renovated. Aircorn master bedroom and one extra room. Two toilets. Aircorn. Water heater. Ventilation is good. close to bus stop and market. 24-hour mart downstairs.
2.20 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
တိုက်​ခန်း​ငှါးရန်​ ရှိသည်​📢📢📢 🔹အမှတ်၄၄၃, ရွှေသူဌေးလမ်း, ၃၆ ရပ်ကွက် မြောက်ဒဂုံ ရှိ ၁၈ပေx၅၄ပေ (ပထမထပ်) အခန်းအား ငှားရမ်းလိုပါသည်။ 🔹တလငှားရမ်းခ ၂၂၀,၀၀၀ကျပ်...
ဘာတာ မဟာဆွေလမ်း 2Rc တိုက်လေးငှါးမည် ပေအကျယ် 10×55 ပေ နေရာကောင်း ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရန် နေရာ ကောင်း ရပ်ကွက်သန့်လေး ငှါမည်
2 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
ဈေးနီးကျောင်းနီး ကားမှတ်တိုင်နီး သွားလာရလွယ်ကူ ရပ်ကွက်သန့် လူမနေရသေး လုံးချင်းတထပ်အိမ်ငှားရန်
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်(ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံ) မြေကွက်ကျယ် အရောင်းသီးသန့်
0 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
တည်နေရာ = ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်(ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံ) မြေပိုင်ဆိုင်မှု = ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အရှုပ်အရှင်းကင်း၊ စာရွက်စာတမ်းစုံ) အကျယ်အ၀န်း = ပေ150 ပတ်လည်(စတုရန်းပုံ၊မျက်နစာ ၃ဖက်ပါ ထောင့်ခြံ) ဈေးနှုန်း = 1Sq ft 700,000(၇သိန်းကျပ်) ဆက်သွယ်ရန် 095124759...အကျိုးဆောင်များဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။...
ကြည့်မြင်တိုင် အုန်းပင်လမ်း(အထက်) / 6th Fl; တမိုးအောက် /12.5' ×55' /အိမ်ရှေ့ခန်းကျွန်းလျှာထိုးခင်းပြီး /77 cakeဆိုင်အနီး / ညဈေးအနီး / ကျောင်းနီး/ ကားဂိတ်နီး/ လမ်းကျယ် / ပတ်ဝန်းကျင်သန့်တိုက်ခန်းအား ၃၃၀သိန်းဖြင့် ( ဈေးအနည်းငယ်ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်) ရောင်းမည်...
လျော့ဈေးနဲ့အမြန်ထုတ်မည် တောင်ဒဂုံမြို့နယ် စက်မှုဇုန်အနီး လမ်းမတန်းမြေကွက် အိမ်အပါရောင်းရန်ရှိ...
315 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် အမှတ်(၂)လမ်းမကြီးနှင့် လှော်ကားလမ်းကိုဆက်သွယ်ထားသော မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ် ၁၀၇ရပ်ကွက် ပေ၂၀*၆၀ အိမ်ပါ ရေပါမီးပါ အိမ်ရှေ့မြေကွက်ကျယ်ဆိုင်ခန်းဆောက်လို့ရပါတယ် ဂရန်မိတ္တူခြမ်း ၃၁၅သိန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 09250502518 09425313749...
အခန်းအကျယ် ၂၄ပေ ၄၇ပေ ပထမထပ် သိန်း ၁၀၀၀ ပုံထဲကမြင်ရသည့်အခန်း ဒုတိယထပ် သိန်း ၉၅၀ ပါကေးခင်းပြီး Aircon နှစ်လုံးတပ်ဆင်ပြီး တတိယထပ် သိန်း ၈၁၀ အခန်း၂ ခန်း ဖွဲ့ပြီး ပါကေးအခန်းတွင်းခင်းပြီ ကျန်နေရာအားလုံး ကြွေပြားခင်းပြီး ပဉ္စမထပ် သိန်း ၅၉၀ ကြွေပြားခင်းပြီး...
880 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ပထမထပ်​ ကိုယ်​ပိုင်​မီတာ ကိုယ်​ပိုင်​​ရေစက်​ ကိုယ်​ပိုင်​ဂျိုးဖြူ ပိုက်​လိုင်းတလိုင်းသီးသန့်​ air con spirits type
360 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မိတ္ထီလာ	| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဈေးထပ်မံလျှော့လိုက်ပါပြီ။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဘိုတစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ၄၄လမ်း၊ ၇လွှာအခန်းရောင်းချင်ပါသည်။ အ ပေါ် ၁လွှာကျန် ရှိပါသည်။ တိုက်သက်တမ်း ၇ နှစ်ခန့် ။ ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာသော တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ အခန်းအကျယ် (၁၂.၅ x ၅၀ ) ပေ၊ အခင်း ကိုရီးယားပါကေး နှင့် ကြွေပြားခင်း။ အခန်းဖွဲ့ထားခြင်းမရှိ၊ ဓါတ်လှေကားပါရှိသည်။ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပြီး ၊အသင့်နေနိုင်သော အနေအထားပါ။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေပါသည်။ အနီးအနားတွင် ဂမုန်းပွင့်စူပါ၊ ဘိုကလေးဈေး၊ ကျောင်း၊ ဘဏ်၊ စားသောက်ဆိုင် တို့နှင့်လ...
​ဝေဇန္တာ​ကျောကပ်​. မင်းလမ်း နှင့်​ City Mart အနီး ရာဇသင်္ကြန် ​၄လမ်း ၄လွှာ. (၃ထပ်​​မြောက်​) 19 x 54 ​ပေ ​ခေါင်းရင်းခန်း မီးဖို အုတ်​ခုံ​ကြွေပြားကပ်​​ ရေချိုးခန်း အိမ်​သာဘိုထိုင်​ ​ကြွေပြားကပ်​ ​ရေမီးစုံ တအိမ်လုံး ​ကြွေပြားခင်း အသင့်​​နေနိုင်​ တိုက်​သားအလွန်​​ကောင်း ​ခေါ်​ဈေး ၅၅၀ သိန်း အ​လျော့အတင်းရှိ ညှိနှိုင်း...
285 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
လှိုင်မြို့နယ် (၁) ရပ်ကွက်ရှိ ပထမထပ် တိုက်ခန်းရောင်းပါမည်။ &gt;&gt; ပေ ၁၁× ၄၀ &gt;&gt; အိပ်ခန်း တစ်ခန်း ၊ ပါကေးခင်း ၊ ကြွေပြားကပ် &gt;&gt; အသင့်နေနိုင်